Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru” | Kichuu
Posted on November 12, 2018 by fmegersa
Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira.
(bbc)—Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Birhaanuu Tsagaayee qorannoo ji’oota shanii ol fudhateen hooggantoota olaanoo fi ogeessoota 63 to’annoo jala oolchu isaani himaniiru.
Namoota shororkeessummaan shakkamanii to’annaa jala oolaa turan irratti aanga’oonni Ejansii Odeeffannoo fi Tika Biyyaalessaa dhiittaa mirga namoomaa raawwataa turuu isaaniis himaniiru.
Shakkamtootni gara poolisii yookin iddoo turtii seera qabeesaaatti osoo hin geeffamiin dura manneen hidhaa seeraan hin beekkamne fi dhokatoo ta’an keessatti hidhamaa turan jedhan Obbo Birhaanuun.
Manneen hidhaa dhokatoo kunneen keessattis shakkamtoota reebuufi dararaa adda addaa irraan gahuun yakka raawwachuu isaanii akka amanan taasifamaa ture jedhan.
‘Lafa keenya qawween sodaachisanii nurraa fudhatan’
Namoota 5 haleellaa boombii Waxabajjii 23’n shakkaman
Shakkamtootni kunis yeroo baay’ee konkolaataa ambulaansiin geejibsiifamaa turan jechuun Obbo Birhaanu himaniiru.
Namootni miseensa dhaabbilee siyaasaa ta’an miseensummaa dhaabbilee siyaasaa keessaa akka bahan dhiibbaan irratti taasifamaa ture kan jedhan abbaan alangaa federaalaa kun, shakkamtootni meeshaa waraanaa kan isaanii hin taane ‘kan kooti’ jedhanii akka mallatteessan taasifamaa akka tures qorannaan arganneerra jedhan.
Namootni manneen hidhaa dhoksaa kunneen keessa turan shiboo elektriikiin reebuu, fiixee qaama hormaataa isaanii piinsaadhaan harkisuu, ifa aduu akka hin argine gochuu, sadafii meeshaa waraanaan reebuu, bosona keessatti qullaa gatuu fi gochaalen biroo irratti raawwatamaniiru jedhan.
Gochaaleen kunneen shakkamtoota irratti raawwatamuu isaaniitif sanadootni fi ragaaleen garaagaraa argamuus Obbo BIrhaanuun himaniiru.
Gochaalee kanaanis namootni miidhaawwan qaamaa garaagaraaf saaxilamaniiru, kan ajjeefaman fi eessa buuten isaanii dhabames akka jiran irra geenyeerra jedhan.
Gochaaleen kunneen hoggantoota Ejansii Odeefannoo fi Tika biyyaalessaan akka hojimaata sirriitti fudhatamanii qajeelfamni itti kennamee ittiin hojjetamaa turuus Obbo Birhaanu ibsa kennanin himaniiru.
Manneen namoota shororkeessummaan himatamanii keessatti meeshaaalee waraanaa fi asxaawwan ofiif olkaa’uun akka mana isaanii keessaa argame fakkeessuunis gochaalee hojjettoota ejansichaan raawwatamaa turan keessaa akka ta’es himaniiru.
Hooggantootni fi ogeeyyiin ejansichaa dhiittaa mirga namoomaa kunneenin shakkaman 36 to’annaa jala oolaniiru jedhan.
Abbaan Alangaa Federaalaa haleellaan boombii Waxabajji 16 MM Abiy Ahimad ajjeesuu irratti fuulleffate hogganaa ejansichaan qindeefamuusaas himaniiru.
Xiyyaara shan, Doonii lama…’METEC’
Malaammaltummaan walqabatee sakkata’iinsa dhaabbilee mootummaa gurguddoo irratti taasifamen, Korporeeshinii Injinaringii Sibiilaa ‘METEC’ bittaawwan biyya keessaa fi biyya alaa heddu karaa seeraan alaatiin raawwataa ture jedhameera.
‘METEC’ fi ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa ilaalchisuunis ogeeyyii qindeessuun qorannoon taasifameera jedhan.
Qorannoon malaammaltummaa dhaabbata ‘METEC’ irratti taasifame, qoranoolee malaammaltummaa biroorraa adda kan taasisu qoranichi shakkamtoota to’annoo jala osoo hin oolchiin dura taasifamu isaati jedhan.
Bu’aalee qorannoo argaman ilaalchisee ‘METEC’ birrii biiliyoona 37 oliin dorgommii caalbaasii malee biyya alaatii bittaa raawwateera jedhan.
Namootni adeemsa bittaa kana keessatti hirmaachaa turan, qabeenya guddaa biyya biraatti akka dhokatu taasisaniiru jedhan.
Bittaan biyya keessaas dhaabbilee hoogganoota ‘METEC’ walin hidhata michummaa fi firummaa qaban irraa caal-baasii malee raawwatame jedhan Obbo Birhaanuun.
Akka fakkeenyaatti dhaabbata tokko irraa caal-baasii malee birrii biiliyoona 205’nin bittaan raawwatamuu himaniiru.
ESAT DC Daily News Mon Nov 12 2018
MADII ODUU OMN : Manni Murtii Federaalaa Dhaddacha Yakkaa Lidataa guyyaa har’aa beellama
Sagalee Bilisummaa Oromoo is live now.
1 thought on “Abbaa Alangaa Federaalaa: “Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru””
JEMERA ABEBE YADETA on November 13, 2018 at 2:30 am said:
kichuu info is my favorite!
Because it’s posting fact information!